Qoorqoor oo iska diiday dalab uga yimid Madaxweyne Farmaajo | Dhacdo
Home Wararka Maanta Qoorqoor oo iska diiday dalab uga yimid Madaxweyne Farmaajo
Qoorqoor oo iska diiday dalab uga yimid Madaxweyne Farmaajo
Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor), Madaxweynaha Galmudug ayaa Talaadadii kulan natiijo la’aan ku soo dhammaaday la yeeshay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa Madaxweynaha Galmudug ka dalbaday inuu taageero go’aanka Golaha Shacabka uu dalka ugu diraayo doorasho qof iyo cod ah, muddo laba sano.
Sarkaal ka tirsan Madaxtooyada Galmudug ayaa Dhacdo.com u sheegay in Madaxweyne Qoorqoor uu si adag uga biyo diiday in laba waddaba ay Galmudug ku muujiso taageeridda Sharciga gaarka ah, ee Isniintii ansixiyeen Xildhibaanada Golaha Shacabka.
“Laba midba Madaxweynuhu wuu diiday, waxaa laga codsaday in Wasiirkiisa Warfaafinta uu la hadlo Warbaahinta, una sheego in Galmudug taageersan tahay muddo kororsiga oo wuu diiday, waxa kaloo laga codsaday in barta Madaxtooyada Galmudug ee Facebook lagu soo qoro qoraal ay Galmudug ku ayideyso go’aankii Golaha Shacabka, iyadiina wuu diiday.” Ayuu yiri Sarkaalkan oo codsaday inaanan magaciisa Warbaahinta loo adeegsan.
Sarkaalkan ayaa faah faahinaya sababta uu Madaxweynaha Galmudug uga horyimid soo jeedinta Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya.
“Madaxweynuhu wuxuu ku dooday inaanan horey loogala tashan, waxbana ka ogayn arrinka labada sano loogu kordhinayo Madaxtooyada iyo Baarlamaanka, waxa sidoo kale uu sheegay inuu Warbaahinta toddobaadkan ka sheegay in dalka uu doorasho aadi doono, mowqifkiisuna waxba ka bedeli karin.” Ayuu yiri Sarkaalka ka tirsan Madaxtooyada Galmudug.
Ilo wareedyo muhiim ah ayaa sheegaya Taliyaha Hay’adda Nabad Suggida & Sirdoonka Qaranka (NISA), Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu isku dayay inuu Madaxweyne Qoorqoor ku cadaadiyo ka noqoshada mowqifkiisa, ha yeeshee uu ku gacan-seyray.
Habeenimadii Isniinta ayay ahayd, markii Wasiiru Dowlaha Madaxtooyada Galmudug, Cumar Axmed Saney (Cumar Shiddo) uu waxba kama jiraan ku tilmaamay warqad ka soo baxay Villa Somalia, laguna baahiyay Warbaahinta Dowladda, taasoo lagu sheegayay in Dowlad Goboleedyada Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Maamulka Gobolka Banaadir ay taageereen qaraarka Golaha Shacabka.
Madaxweyne Qoorqoor ayaa ka mid ah Madaxda Dowlad Goboleedyada, ee sida dhow loola xiriiriyo Madaxda Qaranka, iyadoona Villa Somalia ka taageertay doorashada 2-dii bishii February ee sanadkii 2020 ka dhacday Magaalada Dhuusamareeb, looguna soo doortay inuu noqdo Madaxweynaha Galmudug.
Dad badani waxay Madaxweyne Qoorqoor u arkayeen kan keliya ee madasha wadahadalada isugu hayay Madaxda Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada qaarkood, markastoo wadahadalada burbur ku dhawaadaan.
Previous articleMareykanka oo war adag ka soo saaray muddo kororsiga Dowladda Federaalka
Next articleHormuud Salaam oo bixisay kharashka ku baxaya guurka 10 dhalinyaro oo baahiyaha gaarka qaba